Nhau - Maitiro ekuchengeta zvipfeko zvakajeka sezvitsva kwenguva yakareba?
Mukuwedzera pakuziva nzira yakarurama yekugeza, kuomeswa nekuchengetedza kunodawo unyanzvi, pfungwa inokosha ndeye "mberi uye kumashure kwembatya".
Kana hembe dzawachwa, dzinofanira kupiswa nezuva here kana kuti kuchinjwa?
Ndeupi musiyano pakati pepamberi neshure kwembatya pakudzichengeta?
Chipfeko chemukati chiri kuoma, uye jasi riri kuoma neshure.Zvingave zvipfeko zvinofanira kuomeswa zvakananga kana kuchinjwa zvinoenderana nezvinhu, ruvara uye urefu hwenguva yekuoma.Kune zvipfeko zvezvakajairwa uye ruvara rwakareruka, hapana misiyano yakawanda pakati pekuomesa mumhepo nekuomeswa kune yakatarisana.
Asi kana hembe dzakagadzirwa nesirika, cashmere, mvere dzemakwai, kana donje dzine mavara akajeka, uye hembe dzedenim dziri nyore kupera, zviri nani kudziomesa nenhevedzano mushure mekuwacha, kana zvisina kudaro, kusimba kwemwaranzi yezuva. kukuvadzwa nyore.Kupfava uye ruvara rwejira.
Mushure mokunge zvipfeko zvabviswa mumushini wekugeza, dzinofanira kutorwa kunze uye dzakaomeswa pakarepo, nokuti zvipfeko zvichange zviri nyore kupera uye kuputika kana dzikasiyiwa mu dehydrator kwenguva yakareba.Chechipiri, mushure mekutora zvipfeko kubva mu dehydrator, zvizununguse zvishoma kuti zvidzivirire makwinya.Mukuwedzera, mushure mokunge shati, mabhurawusi, mashizha, nezvimwewo zvaomeswa, zvitambanudzire uye zvibatanidze zvakanaka kudzivirira makwinya.
Kemikari fiber zvipfeko zvinogona kusungirirwa zvakananga pahanger mushure mekugeza, uye ngazvive zvakasununguka uye zviomerwe mumumvuri.Nenzira iyi, haina kuunyana, asiwo inotaridzika yakachena.
Dzivisa chiedza chezuva chakananga pakuomesa mbatya.Anoziva kuomesa zvipfeko, kuitira kuti zvipfeko zvigone kupfekwa kwenguva refu.Kunyanya zvipfeko zvakawanda zvakaita semvere dzenzou, sirika, naironi, nezvimwewo, zvinowanzoita yero mushure mekusangana nechiedza chezuva.Nokudaro, zvipfeko zvakadaro zvinofanira kuomeswa mumumvuri.Pamicheka yose yakachena yemvere, yakaoma mumumvuri ndiyo inonyanya kukodzera.Kazhinji, zviri nani kusarudza nzvimbo ine mhepo uye ine shaded yekuomesera zvipfeko pane nzvimbo ine zuva.
Mushure mekunge sweta yagezwa uye yapera mvura, inogona kuiswa pamambure kana keteni kuti rive rakatsetseka uye rakaumbwa.Kana yaoma zvishoma, isungirire pahanger uye sarudza nzvimbo inotonhorera, inofefetera kuti iome.Mukuwedzera, usati waomesa mvere dzemakwai, bvisa tauro pane hanger kana mubhati kudzivirira deformation.
Masiketi, masutu echikadzi, nezvimwe zvinonyanya kukoshesa maumbirwo, uye anonyanya kukodzera kana akaturikwa pane hanger yakakosha kuti aome.Kana iyi mhando yehanger yakakosha isingawanikwe, unogona zvakare kutenga mamwe akatenderera kana mativi madiki madiki.Pakuomesa, shandisa zvimedu kusungirira padenderedzwa rakatenderedza chiuno, kuitira kuti zvinyatsosimba mushure mekuoma.
Zvipfeko zvemavara akasiyana zvinoshandisa nzira dzakasiyana dzekuomesa.Mbatya dzemakushe dzinogona kuomeswa muzuva mushure mekugezwa.Kunyange zvazvo mbatya dzekotoni dzinogona kuomeswa muzuva mushure mekugeza, dzinofanira kudzoserwa shure munguva.Micheka yesilika inofanira kuomeswa mumumvuri mushure mekugeza.Nylon inonyanya kutya zuva, saka zvipfeko nemasokisi zvakarukwa nenylon zvinofanira kuomeswa mumumvuri mushure mekugezwa, uye kwete kupiswa nezuva kwenguva yakareba.
Paunenge uchiomesa zvipfeko, usamonyanisa zvipfeko zvakanyanya kuoma, asi zviomese nemvura, uye gadzira mapepa, makora, maoko, nezvimwewo zvembatya nemaoko, kuitira kuti zvipfeko zvakaomeswa zvirege kuunyana.
Nguva yekutumira: Zvita-09-2021